Homeस्वास्थ्यकसरी रहने जवान, तन्दुरुस्त र स्वस्थ ?
काठमाडौं । स्वस्थ, तन्दुरुस्त कसरी रहने ? यसको कुनै त्यस्तो सूत्र छैन, जो तपाईं÷हाम्रो जीवनमा पूर्णत लागु गर्न सकियोस् । यद्यपि सामान्य दिनचर्यालाई बदलेर वा खानपान र आनीबानी परिवर्तन गरेर हामीले निरोगी जीवन बाँच्न सक्छौं । अर्थात अनुशासित जीवनशैली अपनाएर जवान, तन्दुरुस्त र स्वस्थ रहन सकिन्छ । यसका लागि अनियन्त्रित खानपान त्याग्नेदेखि सन्तुलित दिनचर्या अपनाउनेसम्मको कुरामा हामी सर्तक हुनैपर्छ । ठूलै कुरा परिवर्तन गर्नु पर्दैन । केवल हामीले आफ्नो खराब आनीबानी त्यागे हुन्छ ।
धुम्रपानले तपाईंको शरीरमा उमेरको असर छिटै देखिन लाग्छ । धुम्रपानले तपाईंको शरीरमा धेरै नराम्रो असर गर्छ र यहि लक्षण तपाईंको अनुहारमा पनि देखिन थाल्छ । तपाईंको छाला चुरोटबाट निस्कने धुँवाको सम्पर्कमा आउँछ भने त्यसले धेरै नोक्सान गर्छ ।
यो प्राकृतिक रुपले स्वस्थ अनुहारलाई नोक्सान पुर्याएर त्यसको उपल्लो पत्रलाई नष्ट गरिदिन्छ । यसले अनुहारलाई जवान बनाइ राख्ने एलस्टिन प्रोटिन पनि सकिन्छ ।
धुम्रपान गर्नाले तपाईंको छालामा चाँयाको असर छिटो देखिन थाल्छ । चुरोटमा पाइने निकोटिनले रक्त कोषहरुलाई खुम्च्याइदिन्छ । यसले शरीरमा अक्सिजन र अन्य पोषण सहि मात्रामा पुग्न पाउँदैन ।
यदि तपाईं एक स्वस्थ र जवान छाला चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईंले धुम्रपान छोड्नुपर्छ ।
व्यायाम गर्नुहोस् जवान रहनुहोस्
नियमित व्यायाम गर्नु तपाईंको शरीरको शक्ति र कार्यक्षमतालाई बढाउँछ । यसले तपाईंको छाला पनि धेरै कसिलो हुन्छ । नियमित व्यायाम नगर्ने र असन्तुलित जीवनशैली अपनाउनाले तपाईंको शरीरको कार्यप्रणाली ढिलो हुन्छ । यसको असर उमेर धेरै देखिने रुपमा अगाडि आउन थाल्छ ।
व्यायामले तपाईंको शरीरमा रक्त सञ्चार सुचारु रुपले हुन्छ र शरीरको हरेक अंगलाई पर्याप्त मात्रामा रगत मिल्छ । हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदा कैयौं पटक हाम्रो खुट्टा र हातलाई पुरै पोषण मिल्दैन ।
व्यायामको क्रममा शरीरबाट पर्याप्त पसिना निस्कन्छ । यो पसिनाको माध्यमले तपाईंको शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । यसले शरीरको प्राकृतिक मोइस्चराइजर सिबम आयल पनि बाहिर निस्कन्छ ।
यदि तपाईं भरपुर निदाउनुहुन्छ भन उमेरको असरलाई टाढा राख्न धेरै मद्धत मिल्छ । तपाईं राम्रो दिनमा कम्तीमा ६–८ घन्टा निदाउनुहुन्छ भने तपाईंको समग्र स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ । कोसिस गर्नुहोस् कि तपाईंको सुत्ने र उठ्ने समय एकजस्तै होस् ।
योग र ध्यानको माध्यमले पनि तपाईंले उमेरको असरलाई टाढा राख्न सक्नुहुन्छ । योग र ध्यानले तपाईंलाई केवल मानसिक रुपले मात्रै शान्त राख्दैन बरु तपाईलाई शारीरिक रुपले पनि मजबुत बनाउँछ । यसले तपाईंलाई तनावमुक्त हुन मद्धत गर्छ ।
यसले शरीरमा रक्त सञ्चार सहि हुन्छ । यसको साथै मुटुको रोग, मोटोपना र छालाको पोल्ने समस्याबाट पनि राहत मिल्छ । त्यस्तै यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबुत हुन्छ र तपाईं रोगबाट टाढा रहनु हुन्छ ।